Russia inotangazve ndege dzevapfuuri nenyika ina
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Russia inotangazve ndege dzevapfuuri nenyika ina
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Finland Kuputsa Nhau • India Kupwanya Nhau • Qatar Kuputsa Nhau • Russia Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau • Vietnam Kuputsa Nhau
Russia inotangazve basa remhepo neQatar, India, Vietnam neFinland
Vakuru veRussia vakazivisa kuti muna Ndira 27, 2021, Russia ichatangazve kuenda nendege nenyika ina, idzo dzakambomiswa nekuda kwe Covid-19 dambudziko.
Kutanga iri Chitatu riri kuuya, vagari veRussia vachakwanisa kubhururuka kuenda kuQatar, India, Vietnam neFinland. Vagari venyika idzi, nekudaro, vachakwanisa kubhururuka kuenda kuRussia. Izvi zvinoshandawo kune avo vane mvumo yekugara munyika idzi.
Iyi sarudzo yekutangazve kubatana nemhepo nenyika ina idzi yakaitwa nemuzinda weRussia unoshanda mahofisi makuru ecoronavirus, uye iro rinoenderana rakasainwa neMutungamiriri weRussian Federation.
Sekureva kwekuburitswa zviri pamutemo, nendege dzinoenda kuQatar dzichasimuka katatu pasvondo, kuenda kuIndia, Vietnam neFinland - kaviri pasvondo.
Izvo zvakaziviswa zvakare kuti Kupro ichavhura miganho yevashanyi vekunze kubva munaKurume 1.